Fikirka dhaco iska dhawr maalmood? Maxaa ku saabsan qorshaynta qaar ka mid ah safarada maalin inay ku socdaalaan tareenka ka Paris? Faransiis tareenada waa la soomo, fudud, iyo bey'ada-saaxiibtinimo si ay hareer ee France. Iyadoo Save A tareenka, aad u yeelan doontaa in ballan ku daqiiqo oo aan ajuurada ku daray, sidoo kale! score!
The cimilada in Marseilles waa weyn oo lagu daray waxaa jira waxyaabo badan oo si aad u aragto oo aad yeeshaan magaalada. Central Marseilles xoogga badan oo indhaha ku ah magaalada, sida picturesque Old Port ah. Marseille ee qaab weyn ayaa Ganacsi waayo, 2,600 sano iyo ka badan waa degmada oo dhan ka badan hal hortiisa a.
Waxa ay u muuqataa sida ku dhowaad mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay cafe, kalluunka makhaayad, ama qataara, dabaqa dhulka ay, la kuraas debedda, si aad u arki karto nolosha magaaladan faraxgelinta fur sida aad nuujiso pastis a.
Warshaduhu waxay muddo dheer uga soo wareegeen dekedda casriga ah dekedda illaa iyo waqooyiga, iyo in ka badan doonyaha dekedda jir waa raaxo loogu talagalay.
Marseilles ayaa ku taal 773 km koonfur ka xigta Paris. Paris si Marseilles safarada inay ku socdaalaan tareenka waa mid aad u fudud. Tareennada tooska ah ee ka socda Paris ilaa Marseilles waxay ka tagaan Paris Gare de Lyon safar 3.5 saacadood. Haddii aad u safrayso Marseilles on maalmaha fasaxa xagaaga waxaan ku talinaynaa tayaasha tigidhada tareenka fiican ka hor.
Hadda, badan oo ka mid ah waddooyinka Rouen ee weli pedestrianized, taasoo la micno ah in cabbayso iyada oo magaalada si dhab ah ayaa dareensan in ka dhigan tahay sarre u soo laabtay markii. No baabuurta, haad cobbled, aagga dekad, iyo xataa degmada qadiim ah: waxa aan u jeclaadaan? Booqo Rouen inta lagu jiro Juun-Sebtember oo xitaa waxaa lagugu daaweyn doonaa nalal bilaash ah ka soo muuqan kara kaatralka marka qorraxdu dhacdo oo gabbalku dhaco.
Rouen ayaa ku yaal 126 km ka Paris. Paris si Rouen safarada inay ku socdaalaan tareenka waa mid aad u fudud. Oo tababartay Paris fasaxa Rouen Paris Saint Lazare Tareenka Station saacadoodba. safar wuxuu qaadanayaa 1s 15 min inay 1s 45 i, ku xiran tahay tareenka.
Lyon waxay ku taal 463 km ka Paris, safarkan maanta ee ka imanaya Paris wuxuu ku bari doonaa magaalada labaad ee ugu weyn Faransiiska oo aad uga duwan Paris. Paris si Lyon safarada inay ku socdaalaan tareenka waa soomi. Oo tababartay Paris fasaxa Lyon Paris Gare de Lyon saacadoodba muddo ah safarka ku dhawaad 2 saacadood, ku xiran tahay tareenka.
LA Rochelle iyo jasiiradaha ay tahay magaalo ka mid ah in ka badan kun sano jir mustaqbal u soo jeestay! Naalaa qalbiga baxday inka badan Atlantic ah, magaalada ayaa loo bedelay salkeeda badda galay dhaqaale weyn, dalxiis, iyo hanti dhaqameed, iyadoo la sii quruxdiisa gaar ah.
La Rochelle ayaa ku taal 469 km ka Paris. Paris si La Rochelle safarada si ay ugu safraan tareenka waa u fududahay. tareenada TGV Direct fasaxa La Rochelle ka Paris Gare de Montparnasse iyo link Paris in La Rochelle in kaliya 3 saacadood.
Deauville la helay xeebta Normandy, ku dhagan Trouville iyo koonfur-galbeed ee Honfleur. Qayb ka mid ah 'Normandy Riviera' Deauville waa magaalo xeebeed qurux badan. Waxay leedahay xeeb aad u weyn, Guryahan waaweyn, dukaamo weyn, oo sanadle ah film Dabaaldag. Ma aha in la xuso jidkeedii caanka ahaa ee tartanka, koorsada golf -ka sidoo kale casino. Maxay ka badan aad rabto in aad laga yaabaa inuu?
Deauville waa musharrax weyn oo safar maalinle ah ka socda Paris, nolosha bilaabay sidii aragtida nuska walaalkiis Napoleon kii saddexaad. Laga soo bilaabo magaalada ku xeeran ee Trouville, wuxuu eegay guud ahaan meelaheeda dhoobada ah iyo hoosta wuxuuna go aansaday inuu dhiso waddo orod ah. Guryo xarrago leh ayaa laga dhisay inta u dhexeysa orodka tartanka iyo badda waxaana dhashay Deauville.
Deauville waxa uu ku yaalaa 220 km galbeed ee Paris. Paris si Deauville safarada inay ku socdaalaan tareenka waa run ahaantii si sahlan. Tareennada tooska ah ee ka taga Paris ilaa Deauville Paris Saint Lazare saldhigga tareen saacaddiiba iyo safarka tareenka socdaa 2 saacadood.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Saffarada Day inay ku socdaalaan tareenka From Paris” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#daytrip #Fasaxyada Faransiiska #paristrips #xawaare #safafromparis europetravel longtrainjourneys talooyin tareenka tareen safarka